Kôtidivoara - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Côte d'Ivoire)
République de Côte d’Ivoire ((fr))
Repoblikan'i Côte d’Ivoire ((mg))
Teny filamatra : Union - Discipline - Travail
Teny ofisialy fiteny frantsay
Renivohitra Yamoussoukro (ara-politika0)
Tanàna ngeza indrindra Abidjan
- Rano (%) faha 68
- hakitroka faha 56
19 997 000 mpo.
Anaran'ny mponina Ivoarianina
Sandam-bola Franc CFA (XOF)
Faritr'ora UTC +0 (WET)
I Kôtidivoara na Repoblikan' i Kôtidivoara dia firenena any Afrika Andrefana ao amin' ny Vondrona Afrikanina, izay izay manana morontsiraka ao amin' ny helodranon' i Ginea sy ao amin' ny Ranomasimbe Atlantika, izay manana velaran-tany mirefy 322 462 km². I Yamoussoukro no renivohiny ara-pôlitika fa i Abidjan no renivohitra ara-toekarena.
Amin' ny ankapobeny dia iva ny tanin' i Kôtidivoara, izay somary miakatra ao amin’ ny ilany andrefana: ny faritr' i Odiennée, ao avaratra-andrefana, dia ahitana havoana fa ny ao afovoany kosa dia ahitana ny tendrombohitr' i Toura. Ony efatra lehibe no mamakivaky an’ io firenena io, dia i Cavally, i Comoé, i Bandama ary i Sassandra. Miendrika efamira manana lafiny mirefy 600 km eo ho eo ny tanin' i Kôtidivoara. Mamaritra azy aa avaratra-andrefana i Malỳ, ao avaratra-atsinanana i Borkina Fasô, ao atsinanana i Ganà, ao atsimo-andrefana i Liberia, ao andrefana-avaratra-andrefana ny Ginea ary ao atsimo i Atlantika.
Ahitana karazan-javamaniry miisa 225 ny ao amin' ny alan' i Kôtidivoara, nefa noho ny fitrandrahana azy tafahoatra sy ny fikapana ala hahazoana tany hambolena dia mihenan izaitsizy ny velarany.
Nisy mponina miisa 15 366 672 ny tao Kôtidivoara tamin' ny taona 1998 fa 19 997 000 kosa izany tamin' ny taona 2009, tafakatra 26 378 274 izany tamin' ny taona 2020. Foko maro dia maro no mandrafitra ny vahoaka ivoariana. Ny 20 % dia manaraka ny fivavahana silamo, toraka izany koa ny kristiana. Ny sisa amin' ny mponina dia manaraka ny fivavahan-drazana. Ny fiteny ôfisialiny dia fiteny frantsay ary misy fiteny afrikana miisa 70 any ho any ny ao.
Zanatany frantsay i Kôtidivoara taloha fa nahazo ny fahaleovan-tenany izy tamin' ny 7 Aogositra 1960 ka i Félix Houphouët-Boigny, no filoham-pireneny voalohany.
Miantehitra amin' ny fambolena ny toekaren' i Kôtidivoara: izy no firenena voalohany maneran-tany amin' ny famokarana kakaô ary fahafolo amin' ny famokarana kafe. Voly fanondrana ireo roa ireo. Manondrana hazo betsaka koa io firenena io. Ny seranan-tsambon' i Abidjan dia anisan' ireo matanjaka indrindra any Afrika Andrefana. Ny vola ampiasaina any dia ny franc CFA.
I Wikimedia Commons dia manana aino aman-jery mikasika an'i : Côte d'Ivoire
((fr)) sokajy Kôtidivoara ao amin'ny dmoz
((fr)) Site officiel du tourisme
((fr)) Les éditions du Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire de 1959 à 2006 numérisées, au format PDF.
((fr)) Chronologie événementielle 1960-2006 Archived Novambra 25, 2010 at the Wayback Machine
((en)) Côte d'Ivoire sur BBC
((en)) Background Note: Côte d'Ivoire
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kôtidivoara&oldid=1040801"
Dernière modification le 3 Desambra 2021, à 15:13
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 15:13 ity pejy ity.